Pharmaceutical hombodo Market - Worldwide Industry Analysis, Size Trends, Forecast 2016 - 2024
The musika nokuti mishonga mabhodhoro ari Europe kunoratidzwa kwayo kuwana kumatunhu akawanda kuburikidza yayo inokosha nzvimbo iri Iberian Peninsula. Nemhaka Nzvimbo napedyo uye refu nemhenderekedzo nyika ino, Munotatamura kuburikidza yeAtlantic Ocean uye Gungwa reMediterranean, izvozvo Ha ...Read more »
Nemarudzi akasiyana-siyana mapurasitiki
Get pakunzwisisa zvakadzama rakasiyana-siyana mapurasitiki uye nderipi anoita zvakanaka midziyo kuti chigadzirwa yenyu. Tinovimba peji ino ichakubatsira rongonyora kavha acronyms, kuongorora kushanda mapurasitiki siyana, uye kuona kuti unhu zvinokosha muupenyu hwako chigadzirwa packagi ...Read more »
CHII CHINONZI A 'kupedzisa'? A mudziyo pamutsipa kumugumo anosarudza pakukura uye mhando kuvhara kunodiwa kuzadzisa chisimbiso zvakakodzera. A mudziyo chacho runoenzanirana chivharo kuva chienderane apedzerana. Zvinangwa zvedu, tichaongorora zvitaera maviri akasiyana apedzerana uye sei kuziva mumwe. The ...Read more »